Ubuntu Runhare runomira kuve nerutsigiro muna Chikumi, asi isu tichine Plasma Mobile | Linux Vakapindwa muropa
Joaquin Garcia | | Zvimwe Linux, Noticias
Canonical inoenderera kuburitsa zviziviso uye nhau nezvekuuya kuri kuita mukati mekambani yako uye neako Ubuntu chirongwa. Isu tava kuziva kuti Ubuntu Runhare runomiswa kutanga kwaJune. Iyo nhare yekushandisa, Ubuntu Foni inomira ichitambira zvigadziriso uye zvigamba zvekuchengetedzaIwe haugamuchire nhau, uye zvakare hazvingakwanise kuisa mapurogiramu matsva kuchitoro chepamutemo.
Chitoro chepamutemo chakagadzirwa neCanonical yeUbuntu Phone maapplication chichavharwa pakupera kwegore rino, saka zvishoma nezvishoma iyo Ubuntu mobile system haichazovapo pakati pevashandisi vekupedzisira.
Vashandisi vakati wandei vakasimbisa rubatsiro rwavo pamwe nekubatana muchirongwa cheUbuntu Runhare kuenda kumberi. Nekudaro, vashandisi vazhinji vane zvishandiso neUbuntu Runhare, kunyangwe hazvo vachiramba vachishanda, vari kuchinjisa nhare dzavo kuenda kuApple, nekuti ingangoita ese Ubuntu Nhare mbozha mhando ine Android vhezheni.
Plasma Mobile inoenderera mberi nekusimudzira kwayo kunyangwe kudonha kweUbuntu Runhare
Iri ndiro divi rinovava uye rakasviba reGnu / Linux yemafoni. Chikamu chakanaka ndechekuti mamwe maGnu / Linux-based mobile operating system ramba uchienda. Muenzaniso wakanaka weiyi Plasma Mobile, iyo mobile chirongwa cheKDE Project. Iyi sisitimu inoshanda haina kugadzikana asi kuvandudzwa kwayo kuri kuenderera uye iko kunoshanda kumaterminal akaita seNexus 5. Plasma Mobile haizove nechero nharembozha, kusiyana neUbuntu Runhare uye ichaenderana nemhando dzese dzeapp, dzakadai seApple apk, Ubuntu zviyero kana Sailfish OS mapakeji.
Canonical yakarova zvakakomba kune iyo Gnu / Linux nyika yemafambisi, nyika yaive yaenda kumberi nekuvapo chaiko kweLinux mobiles. Chinhu chisingamboregi kushamisa vazhinji (uye zvinoshungurudza vashandisi veizvi zvishandiso). Chero zvazvingaitika, Linux ichaenderera mberi iri parunhare … Kanenge gore rino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ubuntu Foni haichazove nerutsigiro muna Chikumi, asi isu tichine Plasma Mobile
Canonical inofanirwa kujoina KDE kukudziridza nharembozha pamwe chete, kugovera desktop (plasma) uye pamwe chete kubatana kuti uvandudze ruzivo rweGnu / Linux.
Nenzira ,joina nvidia futi uye utore vamwe vatyairi vakanaka.
Zve KDE iyi Kubuntu, rega kutamba nezvazvo uye Plasma Mobile yakasvibira zvekuti ndinonanga kuFirefoxOS, inguva "iyo"